शीर्ष ठाउँमा बालिका पूरा गर्न चीन मा
चिनियाँ बालिका बिचित्रको स्वरूप, परिष्कृत अनुहार सुविधाहरू, सिद्ध छाला र राम्रो- शरीर, तिनीहरूले आकर्षित छन् अधिक र अधिक मानिसहरू वरिपरि संसारमा र पाउन आफ्नो बालिका को सपना छ । तल सबैभन्दा संभावना ठाउँमा भेट्न सुन्दर बालिका मा चीन छ । चिनियाँ पुरुष एक रोचक भन्दै: जब तपाईं आउन चोङ्किङ् मा, तपाईं महसुस गर्न सुरु हुनेछ भनेर तपाईं विवाह पनि प्रारम्भिक । चोङ्किङ् शहर मालिक चीन सबैभन्दा. स्थानीय आर्द्र मौसम र कुहिरो योगदान गर्न आफ्नो चिल्लो छाला, र यसको मसालेदार खाना पनि विश्वास गर्न रक्त परिसंचरण सुधार र हटाउन छ । यसबाहेक, यो पहाडी भौगोलिक वातावरण परिवर्तन गर्न शहर एक प्राकृतिक जिम मदत गर्छ जो फारम स्लिम खुट्टा र सपाट. केन्द्रीय बोलवर्ड फेंग चिरपरिचित ठाउँ पाउन सुन्दर चोङ्किङ् बालिका । चेंगदू, एक देशी शहर मा दक्षिण पश्चिम चीन । शहर लागि प्रसिद्ध छ विशाल पांडा, तातो पट पकवान र सुन्दर बालिका । चेंगदू बालिका कमजोर र सेतो छाला, तिनीहरूले ज्यादातर राखे प्रकाश मा बनाउन-अप र बस देखाउन आफ्नो प्राकृतिक सौन्दर्य । चेंगदू बालिका छन् बस जस्तै, शहर भेटी एक बेहोश, अल्छी, आराम गन्ध छ । चेंगदू, एक आर्द्र र ओसिलो ठाउँमा केही घाम मा जाडो र पतन, त्यसैले सबैभन्दा चेंगदू बालिका राम्रो छाला । सडक छ, सबैभन्दा विशिष्ट र समृद्ध व्यापारिक पैदल सडक शहर मा हुनेछ जहाँ पाउन धेरै राम्रो स्थानीय बालिका । रूपमा चिनिएको छ, यो ठाउँ पाउन प्रेम चीन । सुन्दर पुरातन शहर मा स्थित छ, दक्षिण पश्चिम चीनको युनान प्रान्त हो । यदि तपाईं कहिल्यै भएको त्यहाँ, तपाईं हुनेछ कसरी बुझ्न यो मानिन्छ छ एक सिद्ध को लागि ठाउँ एक रोमान्टिक प्राप्त-दूर: चट्टानमय सडक टहलने मा धेरै सानो कफी पसल, बारहरू र रेस्टुरेन्ट को आदिवासी वास्तुकला घाम, पहाडी, आकाश र हिड्ने प्रेमीहरूले हात-मा-हात छ । बालिका मा देखि हो, सारा देश वरिपरि, तिनीहरूले यात्रा गर्न यो सुन्दर ठाउँ आशा, सुरु गर्न एक जीवनकालमा रोमान्स । को एक ठूलो संख्या संग रात क्लबहरू, रेस्टुरेन्ट र बारहरू, संघाई आकर्षित गरेको छ, धेरै सुन्दर महिला वरिपरि देश । संघाई सबै भन्दा ठूलो संख्या, एकल महिला मा चीन बनाउन, यो एक राम्रो ठाँउ पूरा गर्न एकल महिलाहरु. बुढेसकालमा शहर उक्साए छ यति धेरै चिनियाँ बालिका सपना पछि लाग्न वा खोज्न मौका छ । संघाई बिल्कुल हुनुपर्छ आफ्नो अर्को यात्रा गन्तव्य । यो ठाउँमा पूरा गर्न आफ्नो पूर्वीय सपना-बालिका समावेश क्षेत्र, पहिलो स्टाइलिश केन्द्र मा संघाई सडक, कहाँ बारहरू, रात क्लबहरू, र रेस्टुरेन्ट तपाईं प्रदान एक आदर्श ठाँउ पूरा गर्न जवान बालिका । एक चिनियाँ भन्दै जान्छ»सबैभन्दा सुन्दर दृश्यहरु अन्तर्गत, स्वर्ग र यंग्जहौ छ सबै भन्दा राम्रो दृश्यहरु मा.»यंग्जहौ दावा सास-लिंदा, पुरातन बासस्थान घर र एक विविध सीमा को संस्कृति छ । यो एक सुखद कुरा गर्न बाइक संग एक सुन्दर केटी साथ देश सडक, आनन्द सुखद दैनिक जीवन, वा रापट काँध गर्न काँध साथ हरी क्रिस्टल नदी, साथ टहलने पश्चिम सडक र कुनै समय मा पसलहरु, क्याफेहरू र रेस्टुरेन्ट. हांग्जो छैन मात्र छ लागि जानिन्छ, यो महान् नहर र रोमान्टिक पश्चिम पोखरी, तर पनि सुन्दर महिला.
हांग्जो पश्चिम पोखरी को एक बैठक ठाँउ को लागि धेरै प्रेम पुरातन चीन मिथक र लेजेंड्स छ । यो धेरै रोमान्टिक वरिपरि हिंड्न पश्चिम पोखरी मा वर्षा र पूरा केटी को आफ्नो सपना छ । एक सुन्दर समुद्र तट गन्तव्य को टिप हेइनन प्रान्तको । र यो एक लोकप्रिय ठाँउ लागि रोमान्टिक.
छ उज्ज्वल घाम, नरम बालुवा, स्पष्ट पानी र सुखद जलवायु, यो एक सिद्ध गन्तव्य पूरा गर्न
हार्बिन भनिन्छ उज्ज्वल मोती मा पुल को यूरेशिया देशमा । चीन मा, को नाम को हार्बिन सम्झाउँछ मान्छे को एक विदेशी र रोमान्टिक शहर संग सम्बन्धित बरफ र हिउँ । को बालिका मा हार्बिन छन् अग्लो र सुन्दर छ तर राम्रो लागि जानिन्छ आफ्नो, सीधा स्पष्ट उत्साहित व्यक्तित्व छ । जस्तै शहर को हांग्जो, को नजिकैको शहर सूजौ पनि ज्ञात छ लागि सुन्दर चिनियाँ महिला । यो भने कि सूजौ आधा भन्दा बढी छ को सुंदरियों को दक्षिणी चीन । विशिष्ट सूजौ बालिका धेरै कोमल छन्, आज्ञाकारी, सहानुभूति र प्यारा । हङकङ सबैभन्दा लोकप्रिय पर्यटक शहर एशिया. यो सधैं जान्छ मुख्यधारा फैशन देश र पूर्वी एशिया छ । स्थानीय बालिका छन्, राम्रो शिक्षित र तेजी बुद्धिमान । निस्सन्देह, यहाँ तपाईं गर्न सक्छन् पनि पूरा बालिका देखि सम्पूर्ण देश र वरिपरि संसारमा । हङकङ धेरै राम्रो ठाउँमा जस्तै खाडी, डिज्नील्याण्ड, क्याफेहरू र बारहरू पाउन सुन्दर चिनियाँ बालिका । हा-हा यो साँचो हो सबै चिनियाँ बालिका पनि तातो जस्तै मलाई । म साँच्चै आनन्द संग चिनियाँ । मलाई लाग्छ चिनियाँ मा नै सारा संसारमा । तिनीहरू कहिल्यै परिवर्तन आफ्नो संस्कृति कुनै लागि. म साँच्चै मूल्यांकन चिनियाँ महिला । म आशा छ एक दिन म विवाह छौँ चिनियाँ उत्तेजक केटी । जसले साँच्चै खर्च गर्न सक्छन् रोमान्स जस्तै पहाड । मेरो गर्मी बरफ जस्तै छ । हा-हा यसको सबै चिनियाँ बालिका पनि तातो जस्तै मलाई । म साँच्चै आनन्द संग चिनियाँ । मलाई लाग्छ चिनियाँ मा नै सारा संसारमा । तिनीहरू कहिल्यै परिवर्तन आफ्नो संस्कृति कुनै लागि. म साँच्चै मूल्यांकन चिनियाँ महिला । म आशा छ एक दिन म विवाह चिनियाँ उत्तेजक केटी । जसले साँच्चै खर्च गर्न सक्छन् रोमान्स जस्तै पहाड । मेरो गर्मी बरफ जस्तै छ । तपाईं छन् भने एक वृद्ध मानिस भूल, जवान बालिका, र जान को लागि एक महिला भनेर छ वर्ष को उमेर । तिनीहरूले साँच्चै छन्, राम्रो र व्यवहार हुनेछ तपाईं. म गरे । ट्या, म अनुमान तपाईं छौं बस डाह को चिनियाँ बालिका र तपाईं हुनुपर्छ, तिनीहरूले यति सुन्दर छन् बाहिर साथै भित्र र म कुरा गर्दै छु, तिनीहरूलाई अधिकांश, नामकरण मात्र केही शहर, म विश्वास, हरेक शहर मा चीन विभिन्न सुन्दर बालिका । उदाहरणका लागि, जांग जिया छन् बालिका जस्तै पहाड फूल, त्यसैले कमजोर र सुन्दर तर पनि यति कठिन सामना गर्न सबै कठोर मौसम मा जीवन, युरोप मा म थियो बस सोच कस्तो पाउन सक्ने एक बाटो नाम यी सबै चिनियाँ शहर र राख्न एक लेबल मा सबै महिला मा जस्तै तिनीहरूलाई तिनीहरूले जस्तै थिए केही प्रकारको उत्पादन वा मासु बिक्री धारण छ ।
कुराहरू आशा गर्न डेटिङ गर्दा एक चिनियाँ महिला साँच्चै चिनियाँ ब्लग →